Iwo akanakisa spas muSpain | Absolut Kufamba
Iwo akanakisa spas muSpain
Alberto Makumbo | | Burgos, España, Granada, Marbella, Oviedo
Iwe unofunga nezvazvo vhiki rega rega kana kupera kwayo kuchiswedera: une mhirizhonga yakawanda kumashure kwako, iwe wakaneta uye vhiki yevhiki inovimbisa zvirongwa zvakafanana seyakagara. Hauna kumbofunga nezvesarudzo yekuzvipa iwe zuva rekushambidza mabhati, majeti uye zororo? Kana iri yako kesi, usarasikirwa neizvi nzvimbo dzakanakisa muSpain mazviri kunyudza mune nyika nyowani dzemafaro.
2 Gran Hotera Las Caldas (Asturias)
7 Villa Padierna Imba (Malaga)
Inofungidzirwa seimwe ye ekare uye anonyanya kuzivikanwa maspas muSpanish jogirafi, Archena inowanikwa makiromita mashoma kubva kuguta rine zita rimwe chete, mudunhu reMurcia. Yakarovererwa pedyo nerwizi Segura, iyo inobvumidza kukweva kwemvura kwakatowanikwa neveIberia ivo muzana ramakore rechishanu BC, iyo Archena spa inosanganisira zvivakwa zveLevante, León, uye mahotera eTermas munzvimbo imwechete, zvichiita kuti mushanyi awanikwe seti yematsime anopisa, jacuzzis uye spa nzvimbo iyo inotora mukana wemvura inosvika kusvika ku51,7ºC, isina mahombekombe akasara akasiyana uye yakatarisana nehutano hwakazara nekuzorora. Pasina kupokana, imwe yemaspas akanakisa muSpain.
Gran Hotera Las Caldas (Asturias)
Asturias inofananidzwa nerunyararo, mhou, green meadows uye, zvakare, hutano hweparadhiso senge nzvimbo dzekupisa dzevakakurumbira Gran Hotel Las Caldas, iri makiromita gumi kubva kuguta reOviedo. Inokodzera kuzadza nekushanya kuguta, hotera iyi inopa dzakasiyana nzvimbo dzekurapa dzakaumbwa senzvimbo yeLas Caldas, kwaunogona kunakirwa Balneario Chaiyo, iyo Aquaxana Ecotermal Center nedziva rayo rekushambira kana Las Caldas Clinic, yakanangana nekurapa kwakanyanya.
MuMontbrió dels Camps, guta diki makiromita makumi maviri kubva kuguta reTarragona, kune nzvimbo yekurapa ine chikumbiro chikuru nzvimbo ... mukati mebindu re botanical! Un 4 nyeredzi hotera avo vane spa zvivakwa zvinodzokorodza pfungwa nekuda kweanopfuura 1000 mativi metres emadziva, matsime anopisa, jacuzzis nenzvimbo dzepa spa uko iwe kwaunogona kusvetuka kubva pakupaza kusvika kupurazi yakakomberedzwa nenzvimbo yekuzorora, kutaura zvishoma.
MuCantabria kune dhorobha rinodziya rinonzi Puente Viesgo, mukati memupata wePas river, inozivikanwa nehotera yakazvarwa kubva kune yekare XNUMXth century complex yaive yatotanga kushandisa mvura yayo inokosha. Nekufamba kwenguva, imba ino yakava hotera yakasarudzika inoumbwa nezvivakwa zviviri zvakabatana ne seti yezvinodziya zvinongoyevedza. Tembere yemvura umo, pamusoro penzvimbo dzakaomarara, iwe unogona zvakare kutera kune dzakasiyana kurapa nedhaka uye musanganiswa wakagadzirwa kubva kune zvakasikwa zvirimwa. Iyo yechokwadi Wellness paradhiso yakanaka kurasika panguva yezororo kuchamhembe kweSpain.
Matsime ane mukurumbira eLanjarón, akazara Sierra Nevada, enda kupfuura emvura yemaminerari yehupenyu hwese inosimbisa ino spa ine maonero echisikigo kubva mudziva akatove akakosha. Nzvimbo ine runyararo yekunakidzwa nemasikirwo uye zvivakwa zvinokurudzirwa nematsime matanhatu akasiyana kwaunogona kunakidzwa Sauna yeFinland, jacuzzis, goosenecks, kurapwa kwakasarudzika, mapopoma emvura uye zvimwe zvakawanda zvinoshamisa. kuti iwe uchazvitsvagira wega apo iwe unofambira mberi kuburikidza neiyi oasis yemufaro uye hutano.
Vazhinji vanoziva kuti, zana ramakore rapfuura, kuchamhembe kwaifungidzirwa senge meca yemaspas akanakisa muSpain. Semuenzaniso, iyi Castilla Termal iyo inoparadzira ayo mahotera uye ekurapa zvivakwa pakati peane mureza nzvimbo yeCantabria neCastilla y León: Monastery yeValbuena, Burgo de Osma, Balneario de Solares uye Balneario de Olmedo. Nzvimbo ina kwaunogona kunakidzwa nenzvimbo dzakasarudzika uko, kuwedzera kune chaiwo madziva ekushambira uye sauna, kune mukana zvakare wekurapa kumarapirwo anotarisana nekudzikisa huremu kana kugadzirisa muviri pamwe nemamwe matambudziko emapfupa uye rheumatism. Imwe yemashure makuru kana zvasvika kune akanakisa spas kuSpain.
Villa Padierna Imba (Malaga)
Dunhu reMalaga rinoratidza paradhiso dzisingagumi dzekunyaradza, pakati padzo pasina kushomeka kwenzvimbo dzakanakisa, Villa Padierna Palace iri imwe yeanokurudzirwa kwazvo. Kugara pahotera iyi mu Marbella, iyo Villa Padierna spa inopa dunhu risingadzivisike uko pasina kushomeka kwe anonhuwirira emabhati ekugezesa, hammam yeArabhu inodhonza iyo yakanakira mabhenefiti kubva kune yekare spa tsika yeyakavakidzana yeMorocco, Greek neFinnish saunas, pamusoro pemadziva akasiyana mune yakasarudzika enclave, pakati peezvekunakidzwa neumbozha, yakanaka kumanikidza yega yekupedzisira bhenefiti iyo inopa Costa del Sol.
Uri kutsvaga spa inozivikanwa here kwaunogona kunzwa kuti hauna kumbosiya iyo mabhati ekare ehumambo hweRoma? Muchiitiko ichocho, tinokurudzira kuti uende kuAlhama de Aragón, guta riri paawa kubva kuguta reZaragoza panobuda hotera yenyeredzi ina iyo inosanganisira nzvimbo yakasikwa yematsime anopisa uye zvitubu zvakatowanikwa munguva yeRoman Era. Hezvino zvekufamba munguva, kusimudzira pfungwa uye kurasika mudunhu re madziva akaumbwa nechisimba grotto inozivikanwa se "El Moro", uyo kushandiswa uye kunakidzwa kwakadzokera kumashure anopfuura makore chiuru.
Iine anopfuura makore mazana manomwe nemakumi matatu emakore enhoroondo kumashure kwayo, iyi spa iri mukati iyo Tena Valley, muAragonese Pyrenees, inovhara anosvika mazana masere nemazana mashanu emamirimita ayo anogara nzvimbo inozivikanwa seTiberia, yemaminerari-ekurapa uye ayo akapatsanurwa kuita nzvimbo ina dzakasiyana dzakamboshanyirwa naMambo Alfonso XIII. Madziva, akasiyana marudzi esauna uye marapiro akasarudzika anosimudzira hunyanzvi hwekare hwekuwana muzvitubu mhinduro yakanakisa yekushushikana uye matambudziko ehutano.
Izvi nzvimbo dzakanakisa muSpain Ivo vanova akakodzera sarudzo kana zvasvika pakusiya kusagadzikana kwevhiki kumashure uye nekukupa iwe mazuva maviri ekuzorora zvakakwana. Iwe wakangoshaya nzvimbo dzakakodzera zvekukanganwa nezve zvese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Iwo akanakisa spas muSpain
Zagreb, chii chekuona